Indraindray dia mora kokoa ny manaraka fotsiny ny tsipika misy teboka rehefa mikasa ny hahazoana antoka fa voalanjalanja sy feno ny marketing nomerika. Ity infographic, fiderana an'i Legit roa, mikendry ny hanao izany. Mandeha mamaky anao a tondrozotra marketing ny fisian'ity tranokalanao ity, finday, ecommerce, fidirana ivelany, fidirana an-tsokosoko, atiny ary fampiroboroboana ny haino aman-jery sosialy.
Singa iray very amin'ity sary ity dia ny fahaizan'ireo paikady rehetra hiara-miasa. Ohatra, ny fampiasana ny varotra atiny hanananao taratasim-pahefana izay havaozina ho an'ny fitaovana finday. Tsy voafaritra ato amin'ity infographic ity fa ilaina tanteraka izany raha te hampiasa mailaka tanteraka ianao ary hiantoka ny famakiana tsara ny mailakao. Nanoratra aho talohan'io ny maoderina mpanentana ny haino aman-jery nomerika, mandanjalanja ny volan'ny paikady tsirairay mba hamoronana mozika mamy sy mamy!
Matetika kokoa noho isika tsy hitantsika fa ny lakilen'ny marketing tsara dia tsy ny fanaovana ny zava-drehetra… mampifandanja ireo paikady, manamafy ny fiantraikany amin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo, ary amin'ny fahazoana ny habetsaky ny paikady hanombohana mba hampivoarana ny vokatra. Izany dia nilaza fa ity dia lisitra fanamarinana tsara mbola hidina ary hiantohana fa tsy misy zavatra tsy hitanao! Ity infographic ity dia manome statistika vitsivitsy ao ambadiky ny fironana marketing amin'ny dizitaly.